Madaxda dowlad goboleedyada oo ku sii jeeda magaalada Dhuusamareeb – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMadaxda dowlad goboleedyada oo ku sii jeeda magaalada Dhuusamareeb
Wararka laga helayo Dhuusamareeb ayaa sheegaya inay ka socoto qaban qaabo lagu soo dhoweynayo Madaxweynayaasha Koofur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Puntland oo saacadaha soo socda ku wajahan.
Sidoo kale waxaa la filayaa in safar dhinaca dhulka ay ku gaaraan Madaxweyne Farmaajo oo uu wehliyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan Cadaado.
Mas’uuliyiin ka socota Beesha Caalamka oo uu ka mid yahay ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya ayaa la filayaa inay gaaraan Dhuusamareeb.
Wariyeyaasha ku sugan Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in la diyaariyay xaruntii uu ka dhici lahaa Munaasabadda lagu dhameystirayo heshiiska labada maamul, waxaa kaloo Madaxda tageysa Dhuusamareeb loo diyaariyay hoy la dejiyo.
Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaa ammaanka sugaya Ciidamada Ahlusuna iyo kuwa ka socda Jabuuti oo qeyb ka ah howl galka AMISOM.
45,125 total views, 2,075 views today
45,125 total views, 2,075 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
45,196 total views, 2,074 views today
45,196 total views, 2,074 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
45,209 total views, 2,073 views today
45,209 total views, 2,073 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
45,231 total views, 2,073 views today
45,231 total views, 2,073 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,267 total views, 2,076 views today
45,267 total views, 2,076 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]